कति सफल भयो विपन्नका लागि खुलेको ‘फुड बैङ्क’ को अवधारणा ? – Mero UK
कति सफल भयो विपन्नका लागि खुलेको ‘फुड बैङ्क’ को अवधारणा ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न लकडाउन सुरु भएको केही दिनपछि चैतको तेस्रो साता धादिङको गजुरी गाउँपालिकाले फुड बैंकको नयाँ अवधारणाको विकास गर्‍यो । यो समयताका गजुरीमात्रै नभएर धेरै स्थानीय तहहरूले फुड बैंकको मोडल अपनाए ।
गजुरीले विपन्न परिवारलाई चार किलो चामल, एक पोका नुन, परिवार अनुसार एक वा आधा लिटर तेल र एउटा साबुन वितरण गर्ने तय भयो । त्यसको खर्च गाउँपालिकाले नै व्यहोर्ने र कोही दाताले दिएको सहयोग पनि लिने भन्ने तयारी थियो । अहिलेसम्म आइपुग्दा त्यो सेवा बन्दप्रायः छ ।
गाउँपालिकाले अत्यावश्यक नभएसम्म एक परिवारलाई एक पटक मात्रै सो सेवा दिने भनेको थियो । अहिले कोही पनि लिन आउँदैनन् र स्टक पनि सकिने अवस्थामा पुगेको छ । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी विवेक नेपाल भन्छन् ‘अहिले त स्टक पनि सकिन लाग्यो । कहिलेकाहीँ आउँछन् मान्छे अहिले स्टक थपेको पनि छैन ।’ यसलाई असफल भएको भन्न नमिल्ने उनी बताउँछन् ।
गजुरीले समातेको फुड बैंकको बाटो त्यसको एक सातापछि रौतहटका स्थानीयले पनि अपनाए । दैनिक ज्यालादारीबाट गुजारा गर्नेको लागि भनेर राजविराजस्थित गजेन्द्र चोकमा झोलामा राहत सामग्री छोडेर जाने अभियान सुरु भयो । त्यतिबेला राहत दिएर सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर खिचाउने चलन बढी नै थियो ।
त्यसको विरोध स्वरूप पनि झोलामा राहन छाडेर जाने र राहत चाहिनेले त्यही झोला बोकेर जाने गरी अभियानले केही समय काम गर्‍यो । तर राहत लिने धेरै तर दिन चाहने देखिनै छाडेपछि त्यो अभियान पनि रोकियो । उनीहरूले दाल,
थिएगो सिल्भाले छाडे पीएसजी
मेरो नाममा युटुबमा भ्यूज आउँदैन भनेर फिल्मबाट निकालिएँः नम्रता(भिडियो कुराकानी)